Bụ obodo kacha ochie na Europe | Akụkọ njem
Mariela Carril | | Nkechi
Dị ka akwụkwọ ọkọwa okwu nke Royal Spanish Academy si kwuo otu obodo bụ mpaghara emebere ka ọ bụrụ mba nweere onwe ya. Ichepụta steeti abụghị obere ọrụ na ọ bụ njedebe nke ogologo akụkọ ihe mere eme ebe adọtala ma degharịa ókèala ọtụtụ oge. Ya mere, ole mba dị n'ụwa taa?
Recognitù UN na -amata mba 194 gafee kọntinent ise. Onye ọ bụla nwere akụkọ ihe mere eme ya, mana ọ bụrụ na anyị eleba anya n'ihe dị nso ... Kedu mba kacha ochie na Europe? Ị mara?
Mba kacha ochie na Europe
Ọ bụ ezie na a na -enwekarị mkparịta ụka gbasara ya, Portugal bụ obodo kacha ochie na Europe. Dịkwa ka anyị kwuru n'elu, ọ bụ nsonaazụ nke ogologo akụkọ ihe mere eme. Gburugburu ụwa, ụmụ mmadụ welitere ọkọlọtọ nke okpukpere chi, agbụrụ ma ọ bụ asụsụ iji chịa n'etiti ndị ọzọ, na Europe, na America, na Asia ...
N'ọnọdụ niile, ndị mmadụ mepụtara echiche obodo site na ịkekọrịta ọdịnala. Ka oge na -aga, ndọrọndọrọ ọchịchị na ndọrọndọrọ ọchịchị ga -etolite steeti aka ike, na -ejigide na ike nke ike mana enwere ngwa agha ngwa ngwa mgbe ike ahụ kwụsịrị. Ka anyị chee echiche banyere Alaeze Ukwu Ottoman, Soviet Union, Alaeze Ukwu Austro-Hungary ...
Ma gịnị mere Portugal? Ntọala ya mere gburugburu afọ 1139 na agbanyeghị na ụbọchị ekwughị ọtụtụ ihe ị ga -atụle nkwụsi ike nke oke ala ya. Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ihe ekwesịrị ịtụle, ee, Portugal bụ mba kacha ochie na Europe.
Nke bụ eziokwu bụ na ka akụkụ ndị ọzọ nke kọntinent ahụ nwere agha na nnupụisi nke kpaliri ókèala ya kpamkpam, eze ukwu gbanwere, alaeze ukwu gbanwere, steeti ọgbara ọhụrụ, ọchịchị onye kwuo uche ya, mba dị iche iche, ọchịchị aka ike ka e hiwere, Portugal nwere akụkọ dị jụụ karịa. Portugal nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ narị afọ iri nke ndụ na ókèala ndị ahụ kwụsiri ike kemgbe ngwụcha narị afọ nke XNUMX.
Ọ tụrụ gị n'anya na ọ bụ Portugal? Ikekwe, ị na -eche maka Gris? Ka anyị cheta ihe mgbanwe anyị na -eburu n'uche, nkwụsi ike nke oke ala. Mgbe ọdịda nke Alaeze Ukwu Rom, ọtụtụ ndị wakporo ókèala Portuguese, n'etiti ha bụ ndị Arab, na mgbe enwere ike weghara ya, Obodo Portugal, etinyere n'ime ala nke Castile.
O doro anya na enwere ọtụtụ mbọ iji nweta nnwere onwe, n'otu oge ahụ ha chọrọ ịchụpụ ndị Arab, nke mechara nweta mgbe Portugal bịanyere aka na nnwere onwe na 1143, akwụkwọ akụkọ nke Pope Alexander III nabatara. N'oge ahụ, Count Alfonso Enríquez, nwa Count Enrique de Borgoña, ezigbo onye agha na onye ndọrọndọrọ ọchịchị, chịrị. Ka oge na -aga, esemokwu nke alaeze Castile ga -akwụsị, site na ịbịanye aka n'akwụkwọ Nkwekọrịta nke Alcañices n'etiti Dionisio I nke Portugal na Fernando IV nke Castile.
Nkwekọrịta ahụ dokwara oke alaeze Porugal na nke León. Mgbe agha ahụ gachara, Portugal nwere ike ilekwasị anya na mmepe nke ya na otu a ka ọ si abanye na oku “Afọ Nchọpụta”. Ụgbọ mmiri ya na -aga n'oké osimiri, na -enyocha ụsọ mmiri nke Africa, zutere njikọ dị n'etiti Atlantic na Oke Osimiri India site na Cape of Good Hope, banye na South na South America, chịrị Brazil, rute na East.
Ala ndị dị na Ụwa Ọhụrụ nyere ya akụnụba ọhụrụ aka na aka a na -egwupụta akụ, na ọla edo na okwute dị oke ọnụ nke mere ogige Eze John V otu n'ime ndị kasị baa ọgaranya na Europe. Mgbe e mesịrị, o nwere esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụ na ụba na mmekọrịta ọha na eze. N'ezie, narị afọ nke XNUMX abụghị narị afọ dị jụụ ebe ọ nwere ụdị nnupụisi dị iche iche na ọbụna nkwupụta agha. Ọzọkwa, n'agbata narị afọ nke iri na itoolu na nke iri abụọ, alaeze ukwu malitere ịda mba na nke Portugal sokwa.
Portugal jikọtara England ọtụtụ oge, na -enweghị chi, yabụ n'ikpeazụ nke nwere mmetụta, n'etiti ihe ndị ọzọ, n'ezie, na ike nke ọchịchị nke mechara kwụsị na Ọktoba 1910. Ya mere Republic a mụrụ, mba na -ekere òkè na Agha Worldwa Mbụ, njichi ike site n'aka ndị agha na ndị bụ salazar, ụlọ ikpe fasizim.
Njedebe nke Agha Ụwa nke Abụọ metụtakwara Portugal. Onweghi onye chọrọ ịhapụ ihe ha nwere na mba ofesi mana ha bụrịrị ọnọdụ enweghị ike. Mgbe ahụ, Portugal batara agha na Angola, na Guinea Bissau, na Mozambique. Nsogbu ndị dị n'èzí emeghị ka nsogbu dị n'ime dị nro ma si otú a, n'ime iri afọ sochirinụ Portugal nwere nsogbu na-enweghị atụ nke dugara n'ihe a na-akpọ Mgbanwe nke Carnation, na 1974.
N'etiti ndị agha na ihe egwu komunizim, ọ bụ N'afọ ndị 70, mba ahụ mechara kwụsị njikọ ya na ógbè ndị Africa ya, na -amata nnwere onwe ha.. N'ikpeazụ, usoro ọchịchị onye kwuo uche ya bidoro kwụsie ike na na 1976 a hoputara onye isi ala mbụ site na ntuli aka zuru ụwa ọnụ.
Ugbu a, ọ bụrụ na anyị na -atụle mgbanwe ọzọ, n'ezie enwere mba ndị tọrọ Portugal. Dị ka ọmụmaatụ, Greece, na omenala ọdịbendị nke puku kwuru puku afọ. N'ụzọ doro anya, ọtụtụ narị afọ ewepụtala mgbanwe na usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya na ókèala ya na anyị ekwesịghị ịtụle oke nke ugbu a na nke Gris oge ochie, mana ọtụtụ omenala mbụ ya ka na -apụta taa wee guzobe ya dịka otu n'ime mba ndị kacha ochie ọ bụghị naanị na Europe kamakwa n'ụwa.
Portugal, Gris, anyị ga -ahọpụtakwa San Marino. Ọ bụ obere mba mana obodo na njedebe yana ọ bụkwa otu n'ime ndị kacha ochie na Europe na ụwa niile. Edebere iwu San Marino n'afọ 301 site n'aka onye na-eso ụzọ Kraịst, Marinus the Dalmatian, onye hapụrụ agwaetiti Arbe ịgbanahụ ụkpụrụ mmegide nke Ndị Kraịst nke Eze Ukwu Rom Diocletian. Ọ bịara ebe a, zoo na Ugwu Titano, wee hiwe obere obodo.
O doro anya na San Marino nọ n'aka ike ndị agbata obi, mana na 1631 Vatican mechara mata nnwere onwe ya. Ọtụtụ afọ ka e mesịrị, na 1797, France makwaara ya na 1815 site n'ọtụtụ mba ndị ọzọ na Europe. Nnwere onwe ya nọ n'ihe egwu mgbe ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ n'oge njikọta Italytali, mana o jisiri ike chebe ya site na mbinye aka nke ọtụtụ nkwekọrịta.
Ọ bụ ezie na San Marino bụ obere steeti, anyị enweghị ike ikwu otu ihe ahụ Francia. Enwere ike ịtọ ntọala mba a na mgbaji nke alaeze Rome dị nsọ na 843 ma ọ bụ n'ocheeze nke Eze Clovis na 481. Ka anyị were otu ụbọchị ma ọ bụ nke ọzọ, nke bụ eziokwu bụ na France adịla kemgbe. oge. looooong ihu igwe.
Anyị nwekwara ike ikwu maka ya Armenia, nke nweworo ókèala nke ya ma ọ dịkarịa ala afọ 2600, nke Bulgaria y y n'èzí Europe Japan, Iran Egypt na Ethiopia ha so ná mba ndị kacha mee ochie.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Nkechi » Kedu mba kacha ochie na Europe